Gen. Indha Cadde & Gen. Cirfiid oo kala qaaday Ciidamadii ku Dagaalamay Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gen. Indha Cadde & Gen. Cirfiid oo kala qaaday Ciidamadii ku Dagaalamay Muqdisho
Waxaa saakay dagaal khasaaro geestay oo u dhaxeeyay Ciidamo kawada tirsan dowlada Soomaaliya uu ka dhacay Xaafada Haanta Dheer ee kutaala inta u dhaxeysa Isgoosyada Ex-Control Afgooye iyo Kuliyadda Jaalle Siyaad.
Dagaalka ayaa bilowday kadib markii Ciidamada Xasilinta Caasimada oo howlgal ka waday xaafada Haanta Dheer ay isku dhaceen Ciidamo katirsan Milatariga Soomaaliya oo ku sugnaa xaafada Haanta Dheer.
Dagaal Saacado qaatay ayaa labada dhinac dhax maray, waxaana dagaalka ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray Ciidamada dagaalamay iyo wali dad shacab ah oo ku noolaa xaafada lagu dagaalamay iyo xaafado kale oo ku dhaw dhaw.
Saraakiil katirsan Ciidanka Milatatriga Soomaaliya iyo Nabad sugida ayaa gaaray halka lagu dagaalamay, waxa ayna saraakiisha ku guuleesteen in xaalada la dejiyo lana kala qaado ciidamada dagaalamay.
Sida aan Wararka ku helnay Saraakiisha goobta gaaray waxaa kamid ah Taliyaha Ciidanka milatatiga General Cirfiid iyo Generaal Yuusuf Indha Cadde, waxa ayna saraakiishan ku guuleesteen in xaalada qaboojiyaan.
Xaafada lagu dagaalamay ayaa sida aan wararka ku heleyno waxaa lagu wareejiyay ciidamo Milatari ah uu hogaaminayo sargaal katirsan Ciidanka Milatariga oo lagu magacaabo Liibaan Madaxweyne, waxaana goobtaasi laga qaaday inta badan ciidamadii dagaalamay.
Saraakiisha ciidan ee gaaray xaafada Haanta Dheer ee lagu dagaalamay ayaa wali waxaa ku sugan saraakiil katirsan ciidanka oo kulamo la leh saraakiisha ciidanka dagaalamay iyo sidoo kale Odayaasha xaafada lagu dagaalamay.
Shacabkii ka qaxay aaga lagu dagaalamay ayaa qaarkood dib ugu soo laabtay gurayhooda, waxa ayna shacabku dhigeen banaan baxyo ay uga soo horjeedeen dagaalka saakay korkooda ka dhacay khasaarahana uu shacabka kasoo gaaray.
Dagaalka saakay ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ahaa kii ugu xooganaa ee mudooyinkan ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana dagaalkan si weyn uga carooday shacabka Muqdisho oo wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidanka Qalabka sida Shacabka ku dul dagaalamaan.